NAVIGATOR EXPLAY အပေါ်မြေပုံများအားကို UPDATE လုပ်နည်း - ရေကြောင်း - 2019
ယနေ့အဖြစ်, သင်အစီရင်ခံရေကြောင်းအပေါ်သစ်ကိုမြေပုံများအား install လုပ်ရန်နှစ်ဦးကိုနည်းလမ်းတဦးတည်း employ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်အများအပြားနည်းလမ်းများ၏ရရှိမှုနေသော်လည်း, သူတို့ကတိုက်ရိုက်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နေကြသည်။
မှတ်ချက်: သင်ရေကြောင်းပေါ်ရှိဖိုင်များကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီသေချာပေါက် Backup တွေကိုပါစေ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အဘယ်သို့ငါတစ် flash drive ကိုအပေါ် Navitel upgrade ပါဘူး
ဒီနည်းလမ်းမှာ, သင်အရှိဆုံးလက်ရှိ updates များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဆိုက် Navitel အသုံးပြုရမည်။ အောင်မြင်စွာ Explay အပေါ်မြေပုံများ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ software ကို updates များကိုရေကြောင်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ site ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များပြောနှင့်ပြီအရာဖြစ်တယ်။
Read more: Explay Navigator ကို update လုပ်နည်း
အဆင့် 1: ဒေါင်းလုပ်ကဒ်များ
အောက်က link ကို, အ Navitel ၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းလုပ်ဆောင်။ အကောင့်သစ်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာသင်အပိုင်းကိရိယာကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် "ကျနော့်ရဲ့ Device များ (update ကို)".
ဆိုက်ဖွင့်လှစ်အပိုင်း၏အဓိက Menu ထဲမှာ "ပံ့ပိုးမှု".
link ကိုစာမကျြနှာကလစ်၏လက်ဝဲဘက်မှာစာရင်းထဲက "ဒေါင်းလုပ်".
ကလေးတစ်ဦး menu ကို၏အကူအညီနှင့်တကွ, ရှေးခယျြ "Navitel Navigator များအတွက် Maps ကို".
သင်ကစာရင်းထဲကသင့်တော်တဲ့ဖိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို select နှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သုံးစွဲဖို့သင်တစ်ဦးကို Activation key ကိုဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှောင်ရှားရန်, သင်ထားတဲ့ဗားရှင်းအဟောင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "9.1.0.0 - 9.7.1884" နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောဒေသကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆင့် 2: လွှဲပြောင်းကတ်
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မီဒီယာ mode ကိုအတွက် PC နဲ့သွားလာမှုကိုချိတ်ဆက်ပါ, သို့မဟုတ်ချောင်းကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ကဒ်စာဖတ်သူကိုကိုအသုံးပြုပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Flash ကို-drive ကို PC မှာချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
စံဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများထဲတွင်အောက်ပါ directory ကို select ပြီးထိုအရပ်မှဖိုင်တွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါမည်။
NavitelContent Maps ကို
အကြိုဖော်ပြထားသောဖိုင်တွဲဖိုင်များရွှေ့, မြေပုံများနှင့်အတူယခင်ကဒေါင်းလုပ်လုပ် archive ကို unpacked ။
အဆိုပါ PC ကိုထံမှ Navigator အဆက်ဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ program ကို run "Navitel Navigator"။ အဆိုပါ update ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အောင်မြင်သော installation ကိုအပေါ်သို့ညျ့စုံ၏။
ဒီ option နှင့်အတူ, သင့်လျော်သောမြေပုံများရရှိမှုမှဘာသာရပ်, သင်လုံးဝနီးပါးမဆိုကို browser မော်ဒယ်မှာသူတို့ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှမဆိုမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည်မှတ်ချက်များအတွက်ကူညီရန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။
Method ကို 2: Navitel Update ကိုရေးစင်တာ
ယခင်တဦးတည်းအနေဖြင့်ဤနည်းလမ်း၏တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကိုသင်အညွှန်းမြေပုံနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုသေချာစေရန်သီးခြားစီ firmware ကို updates များကိုဖျော်ဖြေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ စက်ပစ္စည်း၏မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. သင်အခပေးကတ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သို့မဟုတ်ဆောင်းပါး၏ယခင်အပိုင်းကနေအခမဲ့သတ်မှတ်နိုင်သည်။
download စာမျက်နှာတွင် Navitel Update ကိုရေးစင်တာသို့သွားရန်
Option ကို 1: Pay
Download နှင့်ပရိုဂရမ် Navitel Update ကိုရေးစင်တာ၏တရားဝင် website ကနေ install လုပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်အပိုင်းထဲမှာရှာတှေ့နိုငျ "ပံ့ပိုးမှု" စာမျက်နှာ "ဒေါင်းလုပ်".
တပ်ဆင်ပြီးနောက်, ဆော့ဖ်ဝဲကို run နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာရေကြောင်း Explay မှချိတ်ဆက်ပါ။ ဒါက mode မှာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ် "ကို USB FlashDrive".
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒေါင်းလုပ်" နှင့်စာရင်းထဲက, သင်လိုအပ်မြေပုံရွေးချယ်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်ဒေါင်းလုပ်အချိန်နံပါတ်နှင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
အခုတော့အဓိက Menu ထဲမှာ Navitel Update ကိုရေးစင်တာကဒ်တစ်ခု updated version ကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ခု activation key ကိုဝယ်ယူရန် "ဝယ်ယူမည်" နှင့်အစီအစဉ်၏လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။
လိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, သငျသညျဘရောက်ဇာကို disable နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Option ကို 2: အခမဲ့
သင်အခမဲ့ကဒ်အသုံးပြုလိုသော update ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကိုကြိုတင်အတွက်ဆွဲယူတဲ့ archive ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါရေကြောင်းတစ်ဦးကို flash card ကိုအပိုင်းအပေါ်ပွင့်လင်း "Maps ကို" နှင့်ဆွဲယူတဲ့အကြောင်းအရာထားတော်မူ၏။ ဖိုင်တွေကို Navitel Update ကိုရေးစင်တာကို install နေကြတယ်, ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
အဆိုပါရေကြောင်း Explay နှင့်အတူမည်သည့်အခက်အခဲမှရှောင်ရှားရန်, အဓိကအားဖြင့်အသစ်သောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ သေးငယ်တဲ့ကြားကာလနှင့်အတူအလုံအလောက်ထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်မြှင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
နည်းလမ်းများမသက်ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သော devices များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်၌သင်တို့၏အတွေ့အကြုံ, မည်သည့်မော်ဒယ် Explay Navigator ပေါ်တွင်မြေပုံ update လုပ်ဖို့အလုံအလောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်ကဒီကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ငါတို့သည်သင်လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်ရန်တယ်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Несколько навигационных программ для навигатора Explay (စက်တင်ဘာလ 2019).